News - Mustaqbalka alxanka otomaatiga ah
mashiinka alxanka orbital si toos ah
mashiinka alxanka biibiile yar oo otomaatig ah
Mustaqbalka alxanka otomaatiga ah
Waa isbeddel mustaqbalka dhismaha dhuumaha caqliga leh inay adeegsadaan mashiinnada alxanka dhuumaha oo dhan otomaatig ah. Isbeddelka shuruudaha dhammaystiran ee mashiinka alxanka dhuumaha oo dhan ayaa iska cad. Alxanka buuxa ee otomaatiga ah ee dareenka dhabta ah wuxuu hubiyaa xakamaynta xasiloonida habka alxanka, ilaalinta wax ku oolka ah ee qaansoleyda iyo barkadda la shubay, waxay damaanad qaadeysaa adkeynta saameynta alxanka, waxayna damaanad qaadeysaa tayada alxanka. Dhibaatada cidhiidhiga ah ee xaddidaysa hawlgalka socodka socodka alxanka nus-otomaatig ah ayaa la hagaajiyay, iyo waxtarka shaqada ayaa la hagaajiyay. All-booska alxanka dhuumaha otomaatigga ah waxay ka dhigan tahay in dhuumaha ay go'an yihiin, oo madaxa alxanka otomaatiga ah uu ku wareego hareeraha dhuumaha si loo xaqiijiyo alxanka dhuumaha oo dhan, alxanka toosan, iyo alxanka sare. Nidaamka alxanka oo dhan waxaa dhammeeya alxamade ka shaqeeya guddiga kontoroolka fog, taas oo ay aad u yar tahay saameynta aadanaha iyo ku tiirsanaanta walxaha. Sidaa darteed, dhuumaha oo dhan-booska mashiinka alxanka dhuumaha otomaatiga ah wuxuu leeyahay faa'iidooyinka tayada tolida alxanka wanaagsan, waxtarka alxanka sare, iyo joogteynta tayada alxanka wanaagsan.
Iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda iyo wargelinta, dhuumaha dhuumaha ayaa si tartiib tartiib ah ugu sii siqaya dhinaca dijitaalka, wargelinta, sirdoonka, iyo waxtarka. Mashaariicda la bilaabayo mustaqbalka waxay si buuxda u qaadan doonaan tiknoolajiyada alxanka si toos ah oo toos ah. Mustaqbalka, X90, X100 iyo xitaa tuubooyin heer sare ah, tuubooyin dhexroorkoodu yahay 1422 mm iyo xitaa dhexroor ka waaweyn, sidoo kale waxay qaadan doonaan tiknoolajiyad alxamid otomaatig ah baaxad weyn.
HW-ZD-200 taxane ah qalabka alxanka otomaatiga ah waa mashiinka alxanka dhuumaha mashiinka isku xidha oo dhan oo gudaha ah oo si madax banaan ay u samaysay Shirkadda Tianjin Yixin. Waa ikhtiraac weyn oo cilmiyaysan iyo tikniyoolajiyadeed ee Shirkadda Yixin. Waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa waxsoosaarka wax soo saarka dhismaha oo si wax ku ool ah kor ugu qaadaa ganacsiga dhismaha injineernimada. Ka wareejinta dhamaadka-hoose ilaa dhamaadka-sare. Alxanka buuxa ee otomaatiga ah ee dhuumaha dareenka runta ah wuxuu hubiyaa xakamaynta xasiloonida habka alxanka, ilaalinta wax ku oolka ah ee qaansoleyda iyo barkadda la shubay, waxay damaanad qaadeysaa adkeynta saameynta walxaha, waxay dammaanad qaadaysaa tayada alxanka, waxay xallineysaa dhibaatada cidhiidhiga ah ee xakamaynaysa alxamida semi-otomaatigga ah. socodka dhismaha socodka, iyo hagaajinta Hagaajinta waxtarka shaqada.
Waqtiga boostada: Mar-26-2021
raadkeena, hogaaminta, hal-abuurnimada, wax soo saarka
Waa maxay Aqoonsiga Habka Alxanka
Meelaha Codsiga ee alxanka otomaatiga ah
Telefoonka: 0086-15138903401 / 0086-13034303972
Cinwaanka: Aagga Horumarinta Xiqing, Tianjin, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2021: Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile